Madaxweyne Biixi Oo Si Aan Toos Ahayn Uga Hadlay Xadhiga Xildhibaan Dhakool – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Madaxweyne Biixi Oo Si Aan Toos Ahayn Uga Hadlay Xadhiga Xildhibaan Dhakool
Madaxweyne Biixi Oo Si Aan Toos Ahayn Uga Hadlay Xadhiga Xildhibaan Dhakool
Madaxweynaha JSL Muuse Biixi Cabdi ayaa si aan toos ahayn uga hadlay xadhiga xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool oo ka tirsan golaha wakiilada oo maalmo dhawr ah ku xidhan xarunta CID-da ee Hargeysa.
Madaxweyne Biixi, ayaa hadalkan ka jeediyay afur iyo casho uu qaar ka mid ah cu limada dalka habeen ugu sameeyay madaxtooyada, wuxuu sheegay in madaxweyne, wasiir ama xildhibaan aanu sharciga ka sarayn ee haddii uu ku kaco dambi sharciga la marinayo, waxaanu ugu horayn yidhi “Dardaarankiinii waanu qaadanay oo ay koow ka tahay in Diinta loo gargaaro oo wixii la qabanayaba dhanka Diinta laga bilaabo oo ay ku xigto in nabadda iyo amniga Qaranka la ilaaliyo si wada jir ah.
ciddii khalkhal galinaysa dalka xil kasta oo ay haysana gacan bir ah lagu qabto waayo malaha Diiniyan ba way tahay ee qofka xilka haya fidnada uu bilaaba way ka wayn tahay ta qofka caadiga ah sidaas darteed baa loo yidhaahda qofka xilka haya dambiga uu gala wuu ka sii weynaaada qofka caadiga ah ee kale ee aan xilka hayn.”
Isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu Madaxweyne Biixi yidhi “Markaa haddii qof dambi galo ama qof dilo ama sharcigiiba dilo ama Qarankiiba wax ku wado dee garaaddo kasta oo uu sito haddii uu madaxweynaha yahay xilka xayuubin baa u taalla oo la saaraya.
haddii madaxweynuhu umaddii fasahaadinayo waa in la qabta oo xeer baynu ka dhiganay, haddii wasiirkii xumaynayana waa in la qabta oo xeer baa laga dhigtay haddii uu xildhibaankii Qarankii kala duminayana xeer baynu ka dhiganay, marka in aynaan noqon dawlad dadka danyarta ah uun ku qabata dambiga ka madaxda ahi marka uu wax dumiyana ka daysa iyaduna waa inoo guddoon.”
Previous articleWasiirka Arrimaha Dibadda oo ka qeybgalay Madasha Stockholm
Next articleRaiisul wasaare kuxigeenka Dalka oo bogaadiyay kobaca dhaqaale ee Dalka+Sawirro
Sawirro: Axmed Madoobe oo Muqdisho la yimid ciidamo si cajiib ah...
WAX TARKA LIIN DHANAANTA